Xoriyada dhabta ah – Codka Dhaqdhaqaaqa Somali secular International
Hope Abukar • Qorraalo
Xoriyada dhabta ah
Rumeyta waa doorasho, rumeynta ma ahan wax ku yimaada qasab, caga jugleen, iyo cabsigelin.
Rumeynta waa doorasho ka imaata uurka qof og jiritaanka waxa uu dooranayo in uu rumeyo asagoo adeegsanayo garashadiisa, iyo dooqiisa xorta ah.
Marka aan aragno qof lagu qasbaayo qaadashada diin, caqiidad, dariiqad, fikrad, ama ideology uusan raali ka eheen, su’aasha imanaysa ee iswaydiinta mudan ayaa ah caqiida, ideology, diin, ama xiita dariiqad ma lagu aamini karaa qasab? Qofka wax jiritaankoda uu ku qanacsaneyn in niyda ah ma u rumen karnaa ?
Rumeynta qasabka ku timaado, lkn waa xulasho ka timid qofka gudahiisa isagoo adeegsanaya garaadkiisa iyo garashadiisa gaarka u ah.
Bulshooyinka aan ku dhaqmin fikirka diimooqaraadiga ah guud ahaan iyo gaar ahaan bulshadeena soomaaliyeed waxaan jecelnahay in qofka doonistiisa, xulashadiisa iyo rabitaankiisa loo laafin, lkn la qusbo fulinta rabitaanka waaldiisa iyo waxa bulshada ku qanacsantahay ama aaminsantahay.
Badanaaba waa dhacda in qofka dil iyo wax lamid ah lagu handado hadii uu ka soo jeedsto inuu qaato fikrad la rabo inuu qasab ku aqbalo ama ku rumeyo.
Hadii qofka jirdil iyo wax lamid ah ka badbaado, waxaa dhacda in lagu qaado dagaal xaga nafsada ah (psychological presser) oo jirdilka aad aga xanuun badan sida in caadadis badan dusha laga saaro, in xaga dhaqaalaha laga cariiriyo, in loo adeegsado hadalo cabsigalin ah, handadaad, cay, habaar iyo hadalo niyadjab leh si qofkaas u soo raaco waxa lagu qasbayo.
Waxaa kale oo la adeegsadaa in qofkii laga gooyo bulshada uu dhaqanka la wadaago, walaalahiisa, iyo qaraabadiisa, mararka qaarkoodna waxaa loo diidaa inuu ku noolaado dhulkiisa hooyo.
Waxyaalahaas oo dhan qofka waxay u keeni karta xanuun nafsada iyo caatifada ku yimaada iyo niyadjab badan oo dhaqsi laga kaban karin.
Ka waran hadii qof afka ka sheego inuu rumeye diin ama fikrad uurkiisa aan jirin asago ka baxsanaayo cadaadis aga yimid xaga waalidkiisa, walaalahiisa, dariska iyo bulshada uu la noolyahay?
Makula tahay in rumeynta uu afka ka sheege in ay tahay mid rabitaankiisa mataleysa oo uurkiisa ka timid?
Yaa leh mudnaanta kowaad: rabitaanka qofka, mase rabitaanka bulshada?
Waa wada ognahay dhibka iyo munaafiq nimada uu ku noolyahay qofka lagu qasbe inuu rumeyo waxaan uurkiisa jirin, lkna isweydiinta layaabka leh waxaay tahay: marka qofka afka ka sheego inuu aamine waxa lagu qasbaye oo uurikiisa jirin maxay bulshada nafci u leedahay?
waxaa aad u wanaagsa in qofka lagu ixtiraamo, rabitaankiisa, doonistiisa, iyo doorashada waxa uu jecel yahay oo uu ku qanacsan yahay, taana waa xoriyada dhabta ah ee uu qofka bani’aadamka ah xaq u lereyahay inuu ku noolaado.